Afar kun oo Askari oo Soomaalida Itoobiya u badan ayaa dhawaan la soo galinayo Soomaaliya.
Waxaa la cadeeyey inuu jiro qorshe ay isku afgarteen DFKG ah ee Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya oo ah in gudaha Soomaaliya la soo galiyo 4000.Askaro oo Ciidamadamo Itoobiya ah, iyadoo loo badinayo Soomaalida dagta wadankaas. Wuxuuna qorshuhu yahay inay soo dagaan Baydhabo halkaasna looga sameeyo Aqoonis wadaniyadda Soomaalinimo. Waxayna noqonayaan Ciidan laga xukumo Itoobiya oo halkaas awaamirta ka qaata.
Markii aanu weydiinay sababta Ciidamada Itoobiya loogu badinayo Soomaalida dagto halkaas, waxaa lagu sheegay in laga cararayo si aysan marmarsiiyo u helin kooxaha Itoobiya diidka ah, iyo in haddii ay dhacdo in la soo diro guddi xaqiiqo raadin aysan u helin caddeymo muujinaya in wadanka Soomaaliya ay joogaan Ciidama Itoobiyaan ah.
Sidoo kale qorshaha lagu heshiiyey wuxuu yahay 4.Bilood gudahood in dadka hubka looga dhigo, gaar’ahaan inta udhaxaysa Galkacayo ilaa G/Gedo.
Waxaa la tilmaamayaa in heshiiskaas uu yahay mid si qarsoodi ah ay u galeen madaxda ugu sareysa Soomaaliya iyo Dowladda Itoobiya, waxaana dhawaan la dhamaystirayaa diyaarintii ciidamadaas. Warar kale ayaa sheegaya in lasugayo oo kaliya inta uu kalsoonida ka helayo R/Wasaare Cali Maxamed Geeddi. Si loogu guuro Baydhobo oo ay ciidamaasna usii diyaariyaan nabad-galyada magaalada Baydhabo.
Faafin: Somalitalk.com Nairobi | Dec 15, 2004